WAR CUSUB: Marcelo oo Cristiano Ronaldo kula biiri kara kooxda Juventus!! – Gool FM
(Turin) 12 Luulyo 2018. Sida wararku ay sheegayaan Marcelo ayaa saaxiibkiis Cristiano Ronaldo kula biiri kara naadiga Juventus ee Waddanka Talyaaniga.
Ronaldo ayaa horraantii todobaadkan si rasmi ah ugu biiray kooxda ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga ee Juventus kaddib markii uu ka soo tagay Real Madrid, waxaana uu qalinka ku duugay qandaraas afar sanadood ah.
Haatan Warsidaha reer Talyaani ee Corriere della Sera ayaa warinaya in Marcelo uu ka tagi karo kooxda Real Madrid, isla markaana uu saaxiibkiis Cristiano Ronaldo kula biiro naadiga Juventus.
Wargeyska Talyaaniga ayaa warbixintiisa intaa ku daray in wakiilka ciyaaryahannada ee Jorge Mendes uu dabada ka riixayo heshiiska uu Marwada duqda ah ku imaanayo difaaca reer Brazil, inkastoo sidoo kale la sheegayo in Juve ay iska diiday xiisaha xiddigan.
Haddii uu heshiiskan bilowdo, waxay u badan tahay in 30 sano jirkaan Marcelo uu ku soo wareegi doono adduun dhan 40 illaa 60 milyan oo euro oo u dhiganta 35 illaa 53 milyan oo gini ama 46 illaa 70 milyan oo dollar, waana in la mid ah heshiiskii the Old Lady ay ku heli lahayd haddii ay iibiso Alex Sandro.
Agaasimaha ciyaaraha Barcelona Éric Abidal oo ka hadlay wararka ku aadan in ay raacdo ugu jiraan saxiixa Eden Hazard